Fern Nephilolepis: ilekọta n'ụlọ, foto, ụdị na nkọwa - Mkpụrụ ubi - 2020
Home fern - Nephrolepis: foto na ndụmọdụ maka nlekọta ụlọ
Ọchịchọ ị ga-enwe otu mpempe anụ ọhịa ndị ọzọ na ụlọ gị ga-emezu ma ọ bụrụ na ịzụta ngọngọ.
Nke a bụ osisi dị ịtụnanya ─ otu afọ dinosaurs. N'oge Queen Victoria, ferns ghọrọ ezigbo ewu n'ụlọ obibi Bekee.
Mgbe ahụ, ha na-eme ka ebe obibi na ụlọ ndị dị na Russia dị mma.
Ụwa ferns dị iche iche. N'ụlọ floriculture, e nwekwara ọtụtụ ụdị, ndị a ma ama nke ferns, nephrolepis.
Aha o nwetara site njikọta nke okwu Grik abụọ: nefris ─ akụrụ na lepsis ─ akpịrịkpa. Nephrolepis siri ike, ma n'otu oge ahụ, o nweghị onye nweere amara. Nke a bụ nnukwu fern. Ogologo akwukwo a di iche iche: site na mita 2 ruo 30 cm.
Nephrolepis sitere na ezinụlọ Davallia tinyere Davallia fern.
Nlekọta atụmatụ mgbe ịzụrụ
Ọnụ ọgụgụ nephrolepis bụ ụlọ ihe dị ka ụdị 30 na ọtụtụ ụdị, dịka ọmụmaatụ:
Ụdị dị iche iche. Ha abụọ na-eto eto ma na-atụgharị uche. Na ọdịdị, ọ bụ epiphyte. Osisi dị na steam elu.
Ndabere foto foto Nephrolepis Echere:
Akwụkwọ nke nephrolepis a na-anọchite anya ya na-anọchi anya. Na Ome n'okpuru ala, enwere cones.
Ndabere foto foto Nephrolepis Cardiac
Osisi Ampelnoe, a na-ewere ya dị ka otu n'ime ọmarịcha ferns: ogologo oge nwere ike ịkwado ya n'ụdị isi mmiri, akwụkwọ ndị ahụ bụ ihe mmeghe, na-agbagọ agbagọ. Karịsịa ihe ngosi nke a na-eche mgbe ọ na-eguzo naanị n'ogo.
Foto nke Nephrolepis Green Lady:
Akwụkwọ ya ruru ogologo na otu ọkara ruo mita abụọ. N'okike, kesara na Florida nakwa n'àgwàetiti ndị dị na Atlantic. N'ime ụlọ ọ na-etolite dị ka osisi ampelous.
Ndabere foto foto Nephrolepis Xiphoid:
E nwetara ihe dị ka afọ 100 gara aga n'ihi nzụlite sitere na xiphoid fern. Ọ na-atụgharị akwụkwọ na-atụgharị ọnụ, ọgaranya dị elu. Enwere 10 ụdị Boston Nephrolepis.
Ebe nchekwa foto Nephirolepis Boston:
Ihe dị iche iche na-adịghị mma nke na-adịghị mma, bụ mmasị maka ime ụlọ floriculture, dị ka ọ bụ ụdị ụbụrụ dị ụkọ nke na-eji nwayọọ nwayọọ na-ebuli elu.
Ndabere foto foto Nephirolepis Corditas:
Site na akpa na agbagwo agba nke akwukwo, dị ezigbo mma.
Foto ndị a na-agbaso foto Nephrolepis Kinky:
Iji hụ na osisi ahụ dị jụụ n'ụlọ, ọ dị mkpa ka ị mara ụfọdụ akụkụ nke nlekọta ferns.
Ọnọdụ ụlọ ahịa dị iche na ọnọdụ obibi, na osisi ahụ chọrọ ka eji ya.
Mgbe ị na-esi n'ụlọ nkwakọba ihe ahụ pụta, ị ga-ebu ụzọ tinye ya na tebụl ozugbo na tebụl ma jide ya ruo ọtụtụ awa.
Mgbe ahụ tinyezie ma banye n'otu ebe ahụ, ịlele ala mmiri. Ọ bụrụ na ọ bụ ọkọchị, wụsa mmiri na ebe okpomọkụ.
Mgbe otu ụbọchị gasịrị, ịnwere ike ikpebi ya na-adịgide adịgide. Ọ bụrụ na mmiri amalite ịkụ, ọ ga-adị na fern tinye akpa akpa tupu ya ekesa osisi ahụ.
Ha na-edebe ya n'okpuru ngwugwu ahụ maka ụbọchị 2-3, wepụ ya maka ụbọchị ma tinye ya maka ihe dị ka otu izu maka ihe dị ka otu izu, wepụchaa ngwugwu ahụ kpamkpam.
Usoro a ga - enyere aka ime ka ferns toro na Holland, bụ ebe a na - eji eto eto na - emepe emepe iji mepee uto.
Oge mbụ a na-ebugharị Nephrolelpis mgbe ịzụrụ. Na-emekarị izu abụọ. A ghaghị iji nlezianya wepụ ihe ọkụkụ ahụ site n'ite ụgbọ mmiri ahụ, gbanye mgbọrọgwụ nke nsụgharị ebugharị, na-agbalị ka ọ ghara imebi ha, wepụ sponge floral, ma ọ bụrụ na achọta ya. N'ọdịnihu, osisi anaghị achọ ka a na-ebugharị oge.
Nephrolepis anaghị achọ ọkụ pụrụ iche. Naanị ihe nwere ike ghara ime ya ─ bụ anyanwụ na-enwu gbaa, n'ihi ya, ọ kwesịrị ịbụ pritenyat. Ọbụna ọ dị mma itinye windo dị n'ebe ugwu ma ọ bụ n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ, na n'oge ọkọchị ka iziga na mbara ihu mbara igwe, gaa n'ogige ahụ ma gbalịa ime ya na ndochi anya.
Mgbe ụfọdụ, ọ bara uru maka osisi ahụ iji gbanwee n'akụkụ nke ọzọ n'akụkụ ìhè ahụ. Nrefrolepsis na-etolite na ndò anya, nke dị anya site na windo, mana achọrọ ọkụ ọzọ n'ebe ahụ, ma ọ bụghị ya, osisi ahụ ga-enwe ihe mgbu.
Eziokwu ahụ bụ na ọ bụ osisi nke ebe okpomọkụ dị na ya, na-enye ụfọdụ nsogbu na ịhazi ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri.
Nephrolepis hụrụ ima n'anya ọ na-ata ahụhụ site na mgbanwe okpomọkụ.
Ọ ekwesịghị ịla azụ n'ime afọ ahụ ma bụrụ ebe dịka ogo 18-20.
Ọ bụrụ na nephrolepis bụ oyi, ọ na-akwụsị na-eto eto. Doo doo anya ma daa. Ndị na-ebu ọnụ bụ ihe mmebi.
Nephrolepis Na-achọ ka iru mmiri. Maka ya, oke iru mmiri kwesịrị ịdị na ọkwa 50-55%.
Nọgide na-enwe ọnọdụ dị jụụ maka osisi dị ka ndị a:
gbanye osisi ahụ mgbe nile na nro, mmiri ọkụ ma mee ya ma ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'ụbọchị;
jupụta pebbles ma na-edebe ya mgbe niile;
tinye ite ahụ n'ime ite miri emi ma jupụta na akpa, mee ka ọ dị ọcha, dị ka pebbles;
kwụkwasị na batrị ọkụ ahụ n'okpuru windo nke nephrolepis na-etinye akwa mmiri ma na-agbanye ya mgbe niile;
iji dozie mmiri na-ekpo ọkụ maka ya, ebe ọ na-emechibido ala n'ime ite na akpa rọba.
A na-agba mmiri ọkụ mgbe nile na mmiri dị ṅara ṅara, n'ụba na ọkọchị, n'oge ọdịda ha jiri nwayọọ nwayọọ belata atọ, n'oge oyi, a na-agba ha mmiri nke ọma. Ma ala ekwesịghị ikpochapụ.
Ọ bụrụ na mgbọrọgwụ n'olu ahụ si n'ite ahụ pụta ma gbochie ịgbara mmiri, mgbe ahụ, ọ ka mma ịgbanye n'ime ala nke pan. Ma, mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ọ dị mkpa iji jide n'aka na mmiri ahụ adịghị na-anọgide. Ọ ga-adị mkpa ka a kpụchaa ya iji zere ịtụgharị nke mgbọrọgwụ.
Dị ka A.A.Ladvinskaya si kwuo n'akwụkwọ ya bụ "Decorative Leaf Plants", a na-ejikwa ihe na-enweghị nkwụsị na-agwọ ọrịa nephrolepsies n'enweghị ihe mgbakwunye.
Ma mma nri Nke a na-enye aka n'iwu mgbidi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke dị mkpa maka ferns.
A na-ejikarị fatịlaịza ọkọlọtọ maka osisi ndị nwere ihe ọkụkụ.
Nri dị mkpa site na April ruo September kwa izu. Ọtụtụ ndị na-eto eto na-eji Agricole fatịlaịza maka mma.
Na ọrụ dị otú ahụ ọ bara uru soro iwu ndị dị n'okpuru ebe a:
nephrolrolepsis kwesịrị transplanted otu ugboro n'afọ; Ọ dị mma na mmalite oge opupu ihe ubi (ụfọdụ ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ na-eme transplantation na njedebe nke February, mmalite March);
n'ihi na ọ dị mma ka ị kwadebe ihe na-adịghị emighị emi, kama ọ ga-adị mma maka ite; onye na-akpu ite ahụ, ngwa ngwa ka fern ahụ ga-eto;
a ghaghị ịdọrọ drainage na ala nke ite ahụ; ọ nwere ike agbaji ụrọ shards na perlite weere na akpa;
ala ahụ nwere akụkụ 1 nke ala sod, akụkụ abụọ nke akwukwo, 1 akụkụ nke peat, 1 akụkụ nke humus na ájá; a ghaghị ikpochasị ngwakọta site na ịkụgharị na oven na ogo 200, ma ọ bụ aka ekpe n'èzí ma ọ bụrụ na ntu oyi dị n'okpuru ogo 10;
ị nwere ike ịzụta ala dị njikere maka ferns;
ọ dị mma ịgbakwunye coal a gwakọtara agwakọta na ngwakọta a na-ekpo ọkụ;
A na-etinye Nephrolepis na ite, ndị rhizomes ji nlezianya fesa ala, a na-agbanyekwa ala nke ọ bụla;
a pụghị imebi mkpụrụ ahụ;
a ghaghị itinye osisi a gbanyere mkpọrọgwụ n'ime omimi nke ụlọ ahụ, na-esite n'anyanwụ anyanwụ
ijide n'aka na ị ga-ejide mmiri chọrọ.
Ferns adịghị mkpa kwachaa, ha na-egbutu mmiri ndị ahụ na-atụghị anya ha.
Enwere ike ịgbasa Nephrolepis n'ọtụtụ ụzọ, Ọ ka mma ịrụ ọrụ ndị a n'oge opupu ihe ubi:
A na-ewepụ ụbụrụ ahụ site na ite ahụ, na-agbanye ala ma na-egbutu rhizome, na-achọpụta na e nwere ebe na-eto eto n'akụkụ ọ bụla.
Mgbe ahụ, a na-akụkọta akụkụ nile dị iche iche n'ite mmiri na mkpụrụ mmiri.
Maka ịka mma, ị nwere ike ikpuchi ite ndị ahụ na ite ma ọ bụ akpa rọba.
N'ime otu ọnwa, osisi kwesịrị ịdị na-ekpo ọkụ.
A na-akpa ha na obere akpa. Iji nweta spore, i kwesiri igbutu akwukwo ahihia ma kpochapu ya site na ala ya na-eji plastic ma o bu mma osisi. Spores awụfuru na oyi akwa ụwa obere ihe na-erughị ọkara otu sentimita na mmiri. Ome malitere ịpụta na ihe dị ka ụbọchị 10.
Ụdị nephrolepis dị iche iche na-etolite tubers, a ga-ebugharị osisi ahụ site n'ịkepụta tuber ma na-ehichapụ ebe ndị ahụ dị mkpụmkpụ, ma ọ bụ ndị na-eto eto nwere ike ịkewa ma kụọ ya n'ime ite ọhụrụ, Ome ga-apụta ngwa ngwa.
Antennae nke akwukwo gbanyere mkpọrọgwụ, na-amanye ha n'ala ma na-echekwa ha nke oma. Mgbe ha nyechara mgbọrọgwụ ma tinye ya 2-3, nke dị mkpa ka e kewapụ ya site na nne na nna ma tinye ya na ite dị iche.
A na - emetụta Nephrolepis:
A na-emeso osisi ahụ emetụta ya na actellica ma ọ bụ karbofos.
Ọ bụrụ na ọrịa thrips na akwukwo nematode na-ebute ya, a ga-ebibi osisi ahụ.
Mgbe nje ọnyà na-ebute ya, ọ dị mkpa iji mesoo ya ọ bụghị nanị na osisi, kama windo na okpokolo agba. Mite nwere ike ibi na osisi osisi ruo ogologo oge. Shchitovka emetụta osisi niile dị nso.
Ọtụtụ mgbe osisi ahụ na-arịa ọrịa n'ihi ntụpọ na nlekọta. Site na mmiri na-ezighi ezi, osisi ahụ kpuchiri ya na aja aja, na-agbanwe edo edo.
Okwesiri ime ndokwa ịsa ahụ ma mechie ngwugwu cellophane, tinye ya na ndochi anya.
Meghee akpa naanị maka ịkụcha. Tinye nephrolepis n'okpuru ịsa ahụ mgbe ọ bụla o kwere omume. A na-eme nke a ruo mgbe e weghachiri osisi ahụ.
Fern nwere ike ịta ahụhụ n'ihi ụda ọkụ ma ọ bụ, ọzọ, site na ụzarị anyanwu, mgbe mmiri ahụ malitere ịkụ, ka kwesịrị nyochaa ọkwa ìhè.
Nephrolepis na-emetụta akwụkwọ na mgbọrọgwụ nematode. O sitere na mmiri na-adịghị mma (oke oyi ma ọ bụ ike). Osisi ga-ala n'iyi.
Nephrolepis pụkwara ịkpocha mgbe mgbọrọgwụ na-agbanwe mgbe mmiri na-enweghị mmiri ma ọ bụ n'ihi mmiri nke dị na ala nke ite na-enweghị drainage.
Igwe a na-ekpochapụ ikuku site na gas ụlọ, na-egbochi mmetụta dị iche iche nke mmiri na-ekpo ọkụ na ihe nhicha dị ọcha, gluu, ikpo ọkụ, radiation radiation.
A na-atụ aro ka ị malite nephrolepis maka ndị na-enwekarị nchekasị, na-enweghị nsogbu. Nephrolepis dị mma maka ụlọ ndị jupụtara na ike.
Atụmatụ maka ndị na-akụ mkpụrụ osisi:
tinye nephrolepis gburugburu TV na oyi; ya radieshon ga-aba uru na osisi;
ferns na-ele anya ma ọ bụrụ na e kewapụrụ ha na osisi ndị ọzọ;
ọ na-eto nke ọma n'osimiri tank;
Ọtụtụ nephrolepis dị iche iche na-adịghị mma, n'ihi ya, ha nwere ike ịgbasa vegetatively;
ferns ka mma ịzụta n'oge oge kpo oku anaghị arụ ọrụ n'ime ụlọ, n'oge a, ọ dịịrị ha mfe ime mgbanwe, n'ihi na iru mmiri nke ụlọ dị n'ime oge a dị elu karịa n'oge oge ọkụ ahụ;
ntụpọ ntụ ntụ na ntanetị n'okpuru bụ ọrịa.
Video na isiokwu
Chọpụta ihe ndị na-adọrọ mmasị banyere fern Nephirolepis site na vidiyo dị n'okpuru:
N'agbanyeghị na ọ dị njọ na nlekọta, ndị na-ahụ maka ndị na-elekọta Nephrolepis bụ otu n'ime ferns anụ ahụ. All thanks to the beautiful lush leaves, nke ọ ga-amasị onye na-arụ ọrụ grower.
Ndị ọzọ n'ime ime ụlọ gụnyere: Pelley, Pteris, Cirtriumium, Asplenium, Adiantum, Davallia, Blehnum, Salvinia, Polypodium, Platicerium, Uzhnik na Grozdnik.